Ndị uwe ojii ogbugbu mmadụ na Minneapolis George Floyd iji wepụta agha obodo? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 1 June 2020	• 12 Comments
isi mmalite: vip.pt
Ogbugbu onye isi ojii George Floyd nke ndị uwe ojii Derrek M. Chauvin na Minneapolis nwere ihe ndị a na-enyo enyo na-enye echiche na ebughara agha obodo. Ọ ga - adị nkenke oge ikwu na anyị na - eme ihe nkiri maka fim anyị mana anyị achọghị ka a kpọọ anyị ndị na - eche echiche ịkpa nkata.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bara uru ịghọta na iji usoro enyo na CGI nke taa ọ bụghị nhịahụ ịhazi ihe omimi miri emi na ihe omume dị egwu (gụnyere vidiyo ama na nkwupụta akaebe). Gụọ banyere nke ahụ ọzọ ebe a.
Eziokwu ahụ bụ na a na - akpọ George Floyd na ikpere n'olu ruo nkeji 4 na eziokwu ahụ edebere ya nke ọma nwere ike ịkpọ onye na-enyo enyo.
Iji zere ajọ mkparị echiche, ọ bara uru ịgakwa na mgbasa ozi kachasị. Nnukwu oke na ọnụ ọgụgụ ụlọ ndị a na-etinye na ọkụ dị ka nke ọgba aghara ndị ọkachamara. Ọ bụrụgodi na mgbasa ozi na-ezo aka na nke a, mgbịrịgba mkpu kụrụ.
Mmeghachi omume mgbapụ nke ndị na-eme ngagharị iwe na Black Lives abụghị ihe dịpụrụ adịpụ, dịka ndị ngagharị iwe Antifa na-etinyekwa na ọgba aghara ahụ. Lara Logan nke Fox News na-akọwa na N'ajụjụ ọnụ nke transgender host n'okpuru na ndị a bụ ọgba aghara ndị ọkachamara. Ihe ọ na-ekwughi, mana ihe m na-agwa gị, bụ na ụmụ nwanyị na ụmụ amaala ndị odeakwụkwọ nwere atụmatụ ga-eme ọgba aghara kemgbe. America aghaghi idaba na ogbaaghara. Nke a pụtara na ikekwe anyị na ndị agha nkịtị; ndị ọgba aghara na-agbagha agbagha agha obodo na-abịanụ.
Kikagbu ọgba aghara na obodo ndị ọzọ bụ n'onwe ya ihe ịrịba ama na mgbidi na enwere mpaghara ike na-achịkwa n'azụ a. Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịkọwa na igbu ndị uwe ojii Derrek M. Chauvin (n'ihi na anyị nwere ike ịkpọ ya) na mmadụ 1, na-akpata ọtụtụ ihe ike. Ọ bụ ihe na - enweghị ike ịkọwa na onye na - ekwuchitere ogbugbu a mere ọtụtụ ihe na ndị uwe ojii ibe ya emeghị ihe ọ bụla. Ọ dị ka a ga - asị na ndị uwe ojii achọrọ agha dịka onye iro.
Ọzọkwa website DFNS Veterans nyochara nke ọma site na Detroit, Atlanta na Minneapolis wee hụ ndị ọrụ ngo Pentagon ndị bịara ngagharị iwe ọ bụla. Ha bụ ndị kesara ọkụ ma tụọ nnukwu okwute. Ọ bụ ha na-akpali ime ihe ike ahụ.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ebuola m amụma na Njikota Obodo America ga-aghọrọ ndị ụwa. Nsogbu coronavirus akpalitelarị onu oriri nke ụgwọ ure ahụ ụgwọ. Mkpọchi na ndọpụ mmekọrịta ọha na eze emeela ka esemokwu dị ukwuu n'etiti ndị mmadụ ugbu a na ọgba aghara ndị a yiri ka ọ na-agba ọkụ site na ọrụ, ọgba aghara a na-achọ na-eru nso.
Mgbe Emperor Nero kwụsịrị ike ọchịchị ya, ọ gbara Rome ọkụ (nke a bụ otu nkuzi akụkọ ihe mere eme). Ala eze ukwu nke America aghaghi agha agha, agha agha aghaghi ike oke. Nwere ike ịmepụta usoro ọhụụ mgbe ọ bụla n'ọgba aghara, mana tupu nke a emee, akụ na ụba US aghaghị ịdọrọ dollar ahụ n'ọdịda ya. Nke a ga - enwe mmetụta zuru ụwa ọnụ, mana ọ ga --emepụta ohere maka nrụpụta ego zuru ụwa ọnụ, na dollar ahụ ga - atụfu ọnọdụ ya kpamkpam dịka "ego azụmaahịa a pụrụ ịdabere na ya" na ụkpụrụ ụwa. Ọ bụ akụkụ nke edemede ukwu m kọwara n'akwụkwọ m nke 2019.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: veterans.dfns.net
Black Life Matter 100% mana ị chọrọ ime South Africa lynch? Ole ndị bara uru? George Floyd na nkọwa sara mbara
Amụma: agha obodo US, ọgba aghara na Europe, ndọkata nke NATO na ịrị elu nke Turkey (ASSAM)
Enweghị oke ọrụ na ọtụtụ enweghị ego, otu ụzọ ọ ga - esi pụta bụ ịkagbu gọọmentị ugbu a
Usoro ahụ ga - ada n'onwe ya, ọbụlagodi na anyị anaghị eme ihe ọ bụla ma ọlị?
Tags: Atifa, nwa, agha obodo, Chauvin, Derrek, dollar, agba, Aha ya bụ George Floyd, Lives, M., okwu, aka oru, ndị ọgba aghara
Lydia Roosje dere, sị:
1 June 2020 na 15: 38
Ọtụtụ n'ime "ndị na-eme ngagharị iwe" na-eyi mkpuchi. Egwu nke corona mgbe ị na-etinye ụgbọala n’ọkụ? Yep. N’aka. N'ezie.
1 June 2020 na 15: 41
Ọ bụ otu nnukwu edemede na ọ dịghị ihe na-eme na mberede, egwu a nke ndị na-enyo enyo na mbụ na-arara atụmatụ Ordo ab Chao Master atụmatụ n'azụ ya. Onye na-eme ihe nkiri Porn Floyd maara Chauvin ihe karịrị afọ iri na asaa ma rụọ ọrụ n'ụlọ ebe a na-ere akwụkwọ abalị dị ka ndị na-eche nche, enweghịkwa ọnyà na nchekwa data ndị uwe ojii banyere njide nke Chauvin n'ihi Hoax !! Ndi mmadu n’abia nihi nmebi iwu nke a nke n’agha n’agha na-akwụ ụgwọ.
Oh ee the Floyd Apụghị m iku ume nwuchiri anya NLP nke ndị egwuregwu basketball NBA. Kobe Bryant (Corona) LeBron James wdg.
1 June 2020 na 15: 47
1 June 2020 na 18: 05
1 June 2020 na 18: 25
kpochapụla ụzọ Cointelpro, ọ dị ka onye nnọchi anya aha ya bụ Robertson. Also nwekwara nzukọ na-eyi ọha egwu dịka Antifa nke Soros na-enyo enyo na mbụ. Dị ka ọ dị na mbụ, ha na-egwu egwu abụọ ..
1 June 2020 na 18: 30
Freemasonry-Communism-Zionism nile na-eji aka nke aka nke ndị a na-enyocha na mbụ:
1 June 2020 na 18: 17
N'oge ngwụsị izu ahụ, ekiri m foto ndị dị ndụ na akụkọ na-adịghị ndụ; Ọ bụghị n’ụzọ ị ga-esi kọọ akụkọ ma ọ bụrụ na nke a bụ ọnọdụ enweghị oge; Maka ndị nke bụ ịchụ-aja na ọrụ nile, ma ejighi n'aka ma ihe a niile bụ ebumnuche n'ezie, lelee vidiyo na YT ma chee maka onwe gị;
Dịka ọmụmaatụ, a na-ekwusi ike mgbe niile na ọ dị njọ maka ndị nwe ụlọ ahịa ahụ na azụmahịa ha na-agba ọkụ na ha nwere nchekwube mkpuchi maka nke a na nke a nwere ike ibute nsonaazụ akụ na ụba wdg. Yabụ ebe a na France m na - enweta nsonaazụ ọchụchọ French ma o doro anya; Ha chọkwara ọgba aghara ebe a. Ekwetaghị na nwoke ahụ nwụrụ anwụ n'ezie, mana kedu ka ị ga-esi akọwa nke ahụ nye ndị weghaara ụjọ na olulu miri emi n'afọ ole na ole gara aga dị ka achicha dị ụtọ. Agwara m ndị ọgọ m na ndị maara m ihe ha chere banyere ememe mmeghe nke asọmpi Olympic 2012. Onweghi echiche ha; Anyị na-enwe mwute;
Sanne dere, sị:
1 June 2020 na 20: 39
N'ezie, onye ọrụ ahụ abụghị Derek Chauvin ma ọlị, mana n'eziokwu ọ bụ Maazị Benjamin Ray Hailey. Onwekwara otutu akuko banyere Mr Floyd, o nwere egbugbu n’apata obi ya nke na-aguta: Ordo Ad Chao, aghara aghara.
Ndi mmadu ndi gbara oku oku a bu ndi otu Antifa ma inwere ike che na anyi na enweta ego. Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ ndị mmadụ maara nke a.
2 June 2020 na 14: 11
Nrọ mmiri nke ndị a na-enyocha na mbụ na-emezu emezu, ugbu a, anyị ga-eche obere oge tupu ị nyefee azịza nke moshiach mepụtara.
2 June 2020 na 16: 50
onye na-akpụ akpụ dere, sị:
2 June 2020 na 23: 08
Ruo ọtụtụ afọ akụziworo m ịgbachitere onwe onye, ​​n'etiti ndị ọzọ, ndị ọrụ nchekwa na ndị uwe ojii. Njide njide na njikwa sokwa na nke a.
Anyị so onye ọrụ ibe anyị kirie vidio ndị ahụ ugboro ugboro, n'oge na-adịghị anya, anyị bịara chọpụta na nwoke a anwụghị. Dịkarịa ala, ọ bụghị n'ihi njide nke enwere ike ịhụ na vidiyo ndị ahụ. Nke mbu, nwoke ahu no n’apata ya, ikpere ya wee n’olu. N'agbanyeghị ụdị nrụgide ị tinyere, ị gaghị enwe ike itinye ike na olu nke na windpipe na-emechi. Nke abuo, oburu na ipuru iti mkpu, i nwekwara ike iku ume.
Naanị ihe nwere ike bụrụ ihe jọgburu onwe ya bụ na ị na-etinye ụdọ na ụbụrụ. Ma mgbe ahụ ọ ga-aga n'ime ọkara nkeji na, dịka ọmụmaatụ, belata ihu ya.
Ma ị hụghị ka ọ na-atụgharị n'anya, ụcha akpụkpọ ahụ dị mma, ọ ka nwere ikuku zuru oke iji kparịta ụka, usoro njikwa nwere ike ọ gaghị abụcha oke, mana ọ bụghị egbu egbu. Ọ bụghị otu a.
4 June 2020 na 07: 43
N'ezie, George Floyd nwekwara corona. A na - etinye mantra nke corona na ihe niile. A sị ka e kwuwe, ihe niile ga-adị ka ọnọdụ ha dị nro.
Ọrịa ga-eche ogologo oge n'ụlọ ọgwụ. Gịnị ka ndị dọkịta niile ahụ na-eme mgbe ahụ. Ọ bụ na ha niile abụghị ọkachamara na nje 'corona'? A na-agụ ndị ọrịa na-eche ka ọnwu nwụrụ anwụ na-abịanụ. Na-ebo ndị ọrịa ebubo ma ọ bụ ndị dọkịta. Mee mkpesa ọ dịkarịa ala. Anọla na-atụ ụjọ maka ụjọ. Egwu ebighi-ebi ahụ mana ndị mmadụ kwenyere na ha enwere 'onwe ha' wee biri 'n'ụkpụrụ ọchịchị'?
" Corona Nsogbu Covid-19 bụ ihe echetara afọ 2003 MS Blaster virus nke ana - akpọ Bill Gates
Ọtụtụ puku ndị mmadụ nọ na Dam Square kwụrụ George Floyd ngagharị iwe ma ọ bụ oge ọ bụla maka onye ọ bụla amaghị? »
Nleta ha: 4.174.160